Niverina Tao An-drenivohitr’i Kambodza Ny Fiaram-pitaterana Iombonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Febroary 2014 1:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, русский, English
Afisim-panentanana momba ny fanandramana fiara iombonana ao Phnom Penh.
Manana iray volana handehanana fiara iombonana ireo mponina ao Phnom Penh, Kambodza izay ao anatin'ny fanandramana hampiditra indray fiaram-pitateram-bahoaka ao an-drenivohitry ny firenena mba hampihenana ny fitohanan'ny fiara.
Manana motosikileta (moto taxi na motodup) iray tapitrisa sy fiara 300 000 i Phnom Penh, saingy mahagaga fa tsy manana rafitra momba ny fitateram-bahoaka ity ambonivohitra miha-mivoatra sy mivelatra ity.
Manantena ny governoran'i Phnom Penh fa ny fanandramana maharitra iray volana izay hifarana amin'ny 4 Martsa dia hanampy handresy lahatra ny Kambodziana hampiasa fiaram-pitateram-bahoaka:
Ny tanjon'ity tetikasa mpitari-dalana ity dia ny hampihenana ny lozam-piarakodia sy ny fitohanan'ny fiara ary koa ny hanovàna ny fahazaran'ny Kambodziana mampiasa fiara manokana mba hampiasa fiara iombonana.
Napetraka voalohany tamin'ny taona 2001 ny fiaram-pitateram-bahoaka saingy roa volana fotsiny no naharetan'ny fandaharan'asa noho ny tsy fisian'ny fanampiana ara-bola avy amin'ny governemanta sy ny tombontsoan'ny mpandeha. Ankoatra ny fandehanana moto taxi, mampiasa tuktuks malaza ihany koa ireo mponina ao Phnom Penh.
Abigail Gilbert mahita tombontsoa marobe amin'ny fampiasana fiara iombonana:
Tsy dia nalaza loatra ny fanandramana farany momba ny fiara fitateram-bahoaka, 10 taona mahery izay, satria naleon'ny mponina ny tolotra mitety varavarana amin'ny karazana kodiarana roa. Ity Fanandramana vaovao momba ny Fiara iombonana ao An-tanàna (City Bus) ity, izay vatsian'ny Sampam-piarahamiasa Iraisam-pirenena Japoney ara-bola dia ahafahana mahita raha niova ny fihetsika. Misy ireo tombontsoa miharihary hoan'ireo mpitsidika ny tanàna, anisan'izany ny rivotra voavoatra, ny fahasarotan'ny hisian'ny sinto-mahery, fitovian'ny saran-dalana, ary ny lalana fantatra mazava
Mponina ao Phnom Penh sady bilaogera malaza Tharum Bun nankasitraka ny fahatongavan'ireo fiara iombonana:
Niresaka betsaka momba ny fitohanan'ny fiara, moto sy fiara betsaka loatra isika, ary tsy misy ny fiaram-pitaterana iombonana. Manomboka tamin'ny fiandohan'ity volana Febroary ity, handeha ao amin'ny Arabe Monivong ny fiara iombonana. Tombotsoa hoan'ny ankamaroantsika izay vonona hiverina amin'ny fiara iombonana izany.
Saingy nandre i Tharum fa miahiahy ny amin'ny fiantraikan'ny fiara iombonana eo amin'ny fivelomany ireo mpitondra moto taxi sasantsany:
Nilaza tamiko ny mpitondra moto taxi fa miahiahy mikasika ity fiara fitateram-bahoaka ity izy satria ny fitondrana moto taxi ihany no mba hany fidiram-bolany.
Ahitana fiaram-pitaterana 10 miasa isan'andro manomboka amin'ny 5ora sasany maraina hatramin'ny 8sasany hariva ny fanandramana
Marobe ireo mponina ao Phnom Penh no nientanentana mikasika ity fanandramana fiara iombonana ity ka nandefa ny sarin'ireo fiara iombonana ireo avy hatrany tao amin'ny Twitter:
Miandry fiara iombonana i Vitou. Sambany ho azy izany.
Andro voalohany amin'ny fanandramana iray volana miaraka amin'ny fiaram-pitateram-bahoaka ao #phnompenh #Cambodia Tazana avy eny amin'ny biraoko ao Monivong
One of #PhnomPenh‘s new public bus stops. Yeah, public bus is coming to town. FINALLY. #Cambodia pic.twitter.com/MTbIunoXdo
Iray amin'ireo fiantsonan'ny fiara iombonana vaovao ao #PhnomPenh. Eny, tonga eto an-tanàna ny fiara iombonana. TONGA IHANY NONY FARANY
#Cambodia‘s capital city Phnom Penh gets a public bus system http://t.co/YpKAvhOTv2 #transportation pic.twitter.com/B12haIY9mO
Nahazo rafi-pitaterana iombonana ny tanàna renivohitr'i #Cambodia, Phnom Penh
Tonga ihany farany ny tolotra fiara iombonana ao Phnom Penh, #Cambodia saingy ho ampiasaina ary ve izany?
*Hajiantsary nampiasaina avy amin'i @KhiriCambodia